Icala le-IBM neRed Hat Face le-Xinuos Ukuphulwa kwe-copyright | Kusuka kuLinux
UXinuos wafaka icala e-US Virgin Islands esola ukwebiwa kwempahla yengqondo kanye nokuhlanganiswa kwemakethe yokuzimela abamangalelwa ngokuhlanganyela I-IBM ne-Red Hat. I-Xinuos yakhiwa ngokusebenzisa izimpahla ze-SCO Group cishe eminyakeni eyishumi edlule ngaphansi kwegama le-UnXis futhi ngaleso sikhathi, owalandela i-SCO wayengenayo intshisekelo yokuqhubeka nengxabano ende yalolu daba ngeLinux. Izimangalo ze-copyright manje sezineminyaka engaphezu kwengu-17 ubudala futhi ziye zabukelwa phansi kaninginingi.
I-Xinuos yinkampani eyathenga izinsalela ze-SCO Group ngo-2011. Iqembu le-SCO, iyinkampani edume hhayi ngemikhiqizo yayo, kodwa ngamacala ayo ngokumelene ne-IBM neLinux. Ngo-2001, i-SCO, inkampani yase-Unix, yahlangana neCaldera, inkampani yeLinux, ukwakha obekufanele kube yimbangi enkulu neRed Hat. Esikhundleni salokho, eminyakeni emibili kamuva, i-SCO yamangalela i-IBM ngokuhlaselwa okusemthethweni kweLinux.
Ngo-2003, i-SCO Group yafaka isikhalazo esifanayo sempahla enobuhlakani kuXinuos. Ithi iqembu le-SCO linamalungelo ekhodi yomthombo yezinhlelo zokusebenza ze-AT & T ze-Unix ne-UnixWare, nokuthi i-Linux 2.4.x ne-2.5.x yizinto ezingagunyaziwe ze-Unix, nokuthi i-IBM yephule izibopho zayo zesivumelwano ngokusabalalisa ikhodi ye-Linux.
I-New Lawsuit Alleges IBM Incorporated Code Engachazwanga evela ku-UnixWare ne-OpenServe Coder yenkampani ohlelweni lokusebenza lwe-IBM lwe-AIX. Iphinde ithi i-IBM neRed Hat ngqo bakha uzungu lokuhlukanisa yonke imakethe yezinhlelo. Izinhlelo zokusebenza ezifana ne-Unix emathubeni amahle ebhizinisi e-IBM, kushiya iXinuos ngemuva:
“Okokuqala, i-IBM intshontshe impahla ye-Xinuos futhi yasebenzisa leyo mpahla eyebiwe ukwakha nokuthengisa umkhiqizo oncintisanayo weXinuos. Okwesibili, ngempahla eyebiwe ezandleni ze-IBM, IBM neRed Hat ngokungemthetho bavumile ukwehlukanisa imakethe ethintekile futhi basebenzise amandla abo emakethe akhulayo ukuhlukumeza abathengi, izimbangi ezintsha kanye nokuzisungula uqobo. Okwesithathu, ngemuva kokuthi i-IBM neRed Hat bethule uzungu lwabo, i-IBM ithole iRed Hat ukuze iqinise futhi yenze uhlelo lwayo lube unomphela. "
UXinuos uyanweba ngomonakalo okholelwa ukuthi wabhekana nawo ecaleni eligcwele:
“Ngenxa yale misebenzi, uXinuos ukhishiwe emathubeni amakhulu emakethe. Isibonelo, ngaphandle kokuthi iXinuos inikeza uhlelo olusebenzayo olususelwa kuFreeBSD olunenani elikhulu lokuhweba kubasebenzisi bezentengiselwano, iXinuos ayikwazanga ukuthola ukusekelwa okungakanani kwezezimali noma inzalo yamakhasimende kuyo. I-OpenServer 10 ebengingayenza nengifanele ukuyenza ngenxa yezimo zemakethe. Eqinisweni, imakethe ihlanekezelwe kangangokuthi iXinuos inqume ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-70% amakhasimende ayo angakwazi ukunika ilayisense uhlelo lwawo lokusebenza olusha kunalolo olutholakala emakethe esebenzayo. Umphumela wokudalulwa kweXinuos uzwiwa yibo bonke abancintisana nabo ngokulingana. "
Ukufuna kwe-Xinuos ibuye ithi i-IBM idukise abatshalizimali ngokusho emibikweni yakho yonyaka kusukela ngo-2008 ukuthi ungumnikazi wawo wonke amalungelo obunikazi e-Unix nase-UnixWare.
"Yize leli cala limayelana neXinuos nokwebiwa kwempahla yethu yengqondo," kusho uSean Snyder esitatimendeni, "futhi wukukhwabanisa kwezimakethe okuhlukumeze abathengi, ukuncintisana, umphakathi ovulekile, umthombo kanye nokuzisungula uqobo".
Okumangalisa nakakhulu ukuthi, inkampani ithi i-IBM ifuna ukubhubhisa iFreeBSD ngokuphelele: "Isu lika-IBM ngeRed Hat bekucaciswe ngokusobala ngokubhidliza iFreeBSD, obekusekelwa kuyo izinto ezintsha zakamuva ezivela kwaXinuos."
Futhi iyaqhubeka nokufuna hhayi nje ukulimala, kepha ukuguqulwa okuphelele kokutholwa kwe-Red Hat kwe-IBM: "Ukuhlangana kufanele kutholakale kungavumelekile okwephula okungenani iSigaba 7 soMthetho weClayton, kanti i-IBM neRed Hat kumele bayalelwe ukuthi bahlukanise futhi basule zonke izivumelwano ezihambisana nabo."
Ngenkathi iRed Hat ingaphendulanga ngokushesha isikhalazo, okhulumela i-IBM uDoug Shelton uthe:
"Izimangalo ze-copyright zikaXinuos ziphinda izimangalo ezigugile zalowo owayengaphambi kwakhe, ama-copyright akhe athengwa nguXinuos ngemuva kokuqothuka, futhi awanasisekelo." Uyanezela ukuthi “amacala ka-Xinuos okulwa nokungathembani abhekene ne-IBM neRed Hat, okuyinkampani enkulu kunazo zonke emhlabeni yama-software, nawo awaphikisi. I-IBM neRed Hat zizovikela ngamandla ubuqotho benqubo yokuthuthukisa isoftware yomthombo ovulekile kanye nokuzikhethela okungokwemvelo ngakho-ke umncintiswano okhuthazwa yisoftware yomthombo ovulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-IBM neRed Hat babhekene necala lokwephula i-copyright ye-Xinuos
IPenpot: I-Open Source Prototyping and Design Platform
IProxmox Mail Gateway 6.4 ifika nezibuyekezo, ukuhlanganiswa neProxmox Backup nokuningi